Guddiga doorashada Kenya oo dalbanaya in la laballaabo miisaaniyadda - Sabahionline.com
Guddiga doorashada Kenya oo dalbanaya in la laballaabo miisaaniyadda Maajo 11, 2012
Madaxa Guddiga Madaxa bannaan ee Kenya ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha (IEBC) ayaa Khamiistii (10-ka May) sheegay in uu guddigu u baahan yahay ugu yaraan 35 bilyan oo shilin ($419 milyan) oo ku aaddan doorashooyinka soo socda, lacagtan oo ka dhigan laballaaab intii ay Maaliyaddu u qoondaysay. Qodobbo la xiriira
Komishanka doorashooyinka Kenya oo aan lacag ku filan u hayn doorasho ku celis ah
Doorashooyinka Kenya oo la qaban doono 2013-ka
"Waxa aannu hellay waxay ahayd 17.5 bilyan oo shilin ($209 milyan). Waxaannuna horay u weydiisannay 41.1 bilyan oo shilin ($492 milyan)," ayuu yiri madaxa fulinta ee IEBC,James Oswago, sida ay sheegtay Capital FM News-ta Kenya. Wuxuu u sheegay garsoorka baarlamaanka in gaboodkaa dhinaca lacagta ahi uu saameyn ku yeelan doono arrimo muhiim ah sida kharashaadka dacweynta, diiwaan-gelinta codeeyayaasha iyo wareegyo kale oo doorasho oo dhici kara. Guddoomiyaha IEBC Issack Hassan ayaa guddiga u sheegay in haddii uu baarlamaaanku ku adkaysto qoondada haatan ee miisaaniyadda, in ay noqon doonto in doorashadu ay socoto saddex beri meeshii ay ka socon lahayd hal maalin ah. Isaac Ruto oo ah xildhibaan laga soo doorto Chepalungu ayaa argaggax ka muujiyey caddadka lacagta. “Markii hore, waxaan xoogaa ka yara cabsi qabay 17 bilyan oo shilin, laakiin ma fahmi karo sababta ay ugu sii qaadeen 41 bilyan oo shilin. Waa wax ay maskaxdu la dhakafaarto,” ayuu yiri. “Noo sheeg sida loo wado doorashooyinkan. Ha oran suuroggal maaha. Noo sheeg sida aad doorashada ugu fulin kartid tirada lacageed ee lagu siiyey. Xildhibaannada ayaa codsaday in ay saraakiisha IEBC dib ugu fiirsadaan miisaaniyaddooda oo ay toddoobaadka soo fool leh la soo noqdaan codsi miisaaniyadeed oo uu baarlamaanku tixgeliyo. Muxuu kula yahay qoraalkan?